तेस्रोपटक मृ’त्युलाई जितेकी श्वेताको अस्पतालको सङ्घर्षमा ! – All top Here
Home/मनोरंजन/तेस्रोपटक मृ’त्युलाई जितेकी श्वेताको अस्पतालको सङ्घर्षमा !
जीवनमै पहिलोपल्ट अस्पताल पुग्दा श्वेता खड्का सात वर्षकी थिइन्। दसैंको समय थियो। बुवाले किन्दिएको नयाँ लुगा लगाएर उत्साही हुँदै यताउता दौडिरहेकी थिइन्। त्यतिबेलै भर्‍याङमा ल’डेर हात भाँ’च्चियो आर्मीमा कार्यरत उनका बुबाले हत्तपत्त उनलाई वीर अस्पताल पुर्‍याए। उपचार सुरु हुन नपाउँदै श्वेता यति डराइन् कि त्यहाँ उनलाई समाउन डाक्टरको ‘महाभारत’ भयो।
‘दुख्यो… दुख्यो… भन्दै डाक्टरलाई गा’ली गरेर अस्पताल वरपर भागेकी थिएँ। त्यतिबेला मलाई समाउन उनीहरूलाई खुब गाह्रो परेको थियो,’ श्वेताले आफूलाई याद भएपछि अस्पताल पुग्दाको त्यो पहिलो पल अझै बिर्सिएकी छैनन्। ‘जीवन कसैका लागि बाँच्ने होइन रहेछ, आफ्नै लागि रहेछ। आफू बाँचेपछि नै समाजले पनि हेर्ने रहेछ। त्यसैले म अब मेरो जीन्दगी मेरो चाहना अनुसार जिउँछु। जे मन लागे, त्यही गर्छु।’
पटकपटक अस्पतालमा फरकफरक रोग र परिस्थितिसँग संघर्ष गरेपछि अहिले अभिनेत्री श्वेता खड्कामा जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पूरै बदलिएको छ। त्यति मात्र होइन, यसको प्रभाव उनको जीवनचर्यामा देखिन्छ।
कुनै बेला नाइट क्लब जान नरुचाउने उनी आज आफूलाई मनपरेका बेला क्लब धाउँछिन्, नाच्छिन्, पिउँछिन्, दिल खोलेर रमाउँछिन्। आफ्नाबारे समाजले के भन्ला, कसरी हेर्ला, त्यसको कुनै मतलब गर्दिनन्। जे गर्दा आफूलाई खुसी मिल्छ, त्यो गरेरै छाड्छिन्। भन्छिन्, ‘म त्यतिबेला हस्पिटलमा म रेको भए त म रेकोमर्‍यै हुन्थेँ। यो दोस्रोपल्ट पनि होइन, तेस्रोपल्ट पाएको जीवन हो। त्यसै खेर जान त कसरी दिन्छु र म ?’
यो उनमा त्यसै जन्मिएको आत्मबोध कहाँ हो र ! फर्केर हेर्दा उनको अस्पताल जीवन कम पीडादायी छैन। बिहे गरेको दुई दिनमै उनका श्रीमान् अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना हुनुपर्‍यो। एक महिनापछि त श्रीकृष्ण अस्पतालबाटै सदाका लागि बिदा भए। अनिल यादवले नेपाल लाइभमा लेखेको यो समाचार हामीले साभार गरेका हौ !